eBay, Google Mepu kana Amazon pakati pevamwe, haichapi iyo kunyorera kweApple Watch | Ndinobva mac
eBay, Google Mepu kana Amazon pakati pevamwe, haichazopa iko kunyorera kweApple Watch
Mamwe maapps akamira kutsigira Apple Watch pasina chikonzero chiri pachena. Mune ino kesi, tiri kuona kuti izvi zvinoshandiswa izvo mune dzimwe nguva zvakapa mushandisi chikumbiro pane smartwatch yekambani, hazvichawanikwe. Ebay, Google Mepu, Amazon, Target yanga ichinyangarika kubva pachigadzirwa chewrist uye ivo havachawanikwe, zvinoita sekunge hapana munhu akazviziva kusvika parizvino apo webhusaiti yeApple Insider yakaratidza kusavapo uku pawachi yevakomana veCupertino.
Icho chikonzero hachina kujeka sezvo pasina munhu anobva kuApple kana chero eaya maapplication ayo asisina rutsigiro paApple Watch ataura nezvazvo. Izvo zviri pachena mune kumwe kunyorera ndezvekuti kushandiswa kushoma, sezvingaite nyaya yeGoogle Mepu, kuti vashandisi veiyo smartwatch vanoshandisa yemuno Apple Mepu kunyangwe hazvo yaibvumidzawo kugamuchira zviziviso zvematanho enhanho , asi kana iri nyaya ye eBay kana Amazon haina kunzwisiswa.
Mimwe yeaya mafomu ayo asingawanikwe pawatch akagamuchira iyo yekuvandudzwa mazuva mashoma apfuura uye kubva ipapo akamira kushanda pachigadzirwa. Hatitende kuti izvi zvinoshandiswa zvinowana rutsigiro zvakare mumazuva mashoma nekuti zvese zvinoratidza kuti iko kufunga kunofunga. Zvichava zvakafanira kuva nemoyo murefu uye kumirira kana zviripo ziviso yepamutemo inoratidza kushandiswa kushoma kweizvi kana chikonzero chaicho chekubviswa kwavo, asi ikozvino izvo zvinoshandiswa hazvichashande paApple wachi kuitira kana iwe usina kunge waona.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » eBay, Google Mepu kana Amazon pakati pevamwe, haichazopa iko kunyorera kweApple Watch
Alejandro De-las Heras Jorge akadaro
Kana maAmazon kana eBay haazoshayikwa nekuti aive asina basa.
Pindura kuna Alejandro De-las Heras Jorge
Iyo yazvino Trojan kukanganisa Macs inonzi OSX.Bella
Apple inoburitsa yechishanu beta ye macOS 10.12.5